लुम्बिनी प्रदेशको नालीबेली : काँग्रेसका जिल्ला सभापतिमा देउवा र पौडेल पक्षबीच प्रतिस्पर्धा | Ratopati
लुम्बिनी प्रदेशको नालीबेली : काँग्रेसका जिल्ला सभापतिमा देउवा र पौडेल पक्षबीच प्रतिस्पर्धा
personतेजेन्द्र के.सी. exploreकाठमाडौं access_timeअसार २३, २०७८ chat_bubble_outline0
नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन नजिकिएसँगै जिल्ला जिल्लामा नेतृत्वका लागि चर्चा हुन थालेको छ । जिल्ला नेतृत्वका लागि लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आकांक्षीहरुको सक्रियता बढ्न थालेको छ ।
२०७८ असार ५ गते काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीका सम्पूर्ण संगठनात्मक संरचनाको अधिवेशन मिति सार्वजनिक गरे अनुसार जिल्ला अधिवेशन साउन २६ गते हुँदैछ । त्यसैले पनि जिल्ला नेतृत्वका आकांक्षीहरु आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन थालेका छन् ।
काँग्रेसमा देखा परेको दुई गुट (देउवा र पौडेल) अन्तर्गत नै जिल्लामा पनि नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । हाल लुम्बिनी प्रदेशमा जिल्ला सभापातिहरुमा पौडेल पक्षको वर्चश्व छ तर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरुमा देउवा पक्षको बाहुल्यता छ । जसका कारण दुवै गुटले लुम्बिनी प्रदेशमा आफ्नो प्रभाव बढाउन आवश्यक रणनीति बनाउन थालेका छन् ।
एउटा खेमाबाट जिल्लामा तीनदेखि चारजनासम्म सभापतिका आकांक्षी देखिएका छन् । त्यसैले दुवै खेमालाई जिल्ला सभापतिको उम्मेदवार चयनमा हम्मेहम्मे पर्न थालेको छ ।
अहिले जिल्ला सभापतिमा रुचि देखाएकाहरुलाई केन्द्रीय नेतृत्वले प्रदेश सदस्य वा क्षेत्रीय सभापतिमा मिलाएर लैजाने गरी आन्तरिक छलफल गरेको नेपाली काँग्रेस बाँकेका नेता एवं लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य सुुरेन्द्र हमालले बताए ।
जिल्ला सभापति पदका आकांक्षीहरुले आफ्नै खेमाभित्रबाट उम्मेदवारी पाउनका लागि दौडधुप बढाउन थालेका छन् । जिल्ला नेतृत्वका आकांक्षीले आफ्नो प्यानलबाट उम्मेदवार बन्नका लागि कसरत गर्दै आए पनि केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुको प्रभावले पनि नेतृत्व चयनमा केही हदसम्म भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ ।
रुपन्देहीका जिल्ला सभापति अब्दुल रज्जाकले दुई कार्यकाल पूरा गरेका कारण विधानतः उनी पुनः सोही पदमा उम्मेदवार हुन मिल्दैन ।
देउवा पक्षधर रज्जाक नदोहोरिएपछि देउवा खेमाभित्रबाट अब अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने देखिन्छ । सो खेमामा जिल्ला सभापति पदका लागि पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणका भाइ रामकृष्ण खाँण नै सशक्त दाबेदार देखिएका छन् । खाँणले दुई कार्यकाल जिल्ला सचिव भएर काम गरिसकेका छन् । सोही खेमाबाट युवराज गिरी, फणिन्द्र शर्मा पनि जिल्ला सभापतिका आकांक्षी छन् ।
रुपन्देहीमा पौडेल खेमाबाट पनि सभापतिका लागि हरि लम्साल, थानेश्वर घिमिरे, रामचन्द्र ढकाल, अष्टभुजा पाठक र मातृका यादव दाबेदारका रुपमा देखिएका छन् । ढकालले यसअघि नै जिल्लाको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् भने पाठक लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य पनि हुन् ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीको गृहजिल्ला गुल्मीमा अघिल्लो अधिवशेनजस्तै आधा दर्जनको हाराहारीमा सभापतिका आकांक्षीहरु मैदानमा उत्रिने सम्भावना देखिएको छ ।
अघिल्लो पटक देउवा पक्षले एकल उम्मेदवार नबनाउँदा गुल्मीमा पौडेल पक्षका भुवन श्रेष्ठले बाजी मारेका थिए । अहिले सभापतिमा देउवा पक्षभन्दा पौडेल पक्षका आकांक्षीको संख्या बढी छ ।
जिल्लाको नेतृत्वमा पुनः भुवन श्रेष्ठ नै पौडेल पक्षबाट उम्मेदवार बन्ने चर्चा चलिरहेको छ । तर सोही पक्षका खिलध्वज पन्थी, विष्णु बलालले पनि आफू नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने बताउँदै आएका छन् । पन्थी जिल्ला सचिव हुन् भने बलाल उपसभापति हुन् ।
नेविसंघका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं महाअधिवेशन प्रतिनिधि महेन्द्र भण्डारी देउवा समूहबाट सभापति पदका आकांक्षी छन् ।
शालिक पन्थी, रविलाल ज्ञवाली, महिला नेतृ विष्णु सापकोटा पनि सभापति पदका आकांक्षी हुन् ।
बाँकेमा जिल्ला सभापतिका लागि ७ जना आकांक्षी देखिएका छन् । काँग्रेसका पूर्व सभापति सुशील कोइरालाको गृह जिल्लामा पौडेल पक्षको अवस्था बलियो देखिन्छ ।
जिल्ला सभापति किरण कोइराला पूर्वसभापति सुशील कोइरालाकी भाइबुहारी हुन् । जसका कारण उनको झुकाव पौडेल पक्षतिर छ ।
अहिले जिल्ला सभापतिका आकांक्षीमा निरञ्जन सिजापति, राजकुमार बर्मा, बादशाह कुर्मी, ज्ञानु केसी, नारायण गौडेल, लक्ष्मी नारायण शाह र सुनिल राणाले रुचि देखाएको प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्र हमालले रातोपाटीलाई बताए ।
सिजापति १३ औं महाधिवेशन र बर्मा १२ औं महाधिवशेनमा जिल्ला सभापतिमा पराजित नेताहरु हुन् ।
सिजापति, बर्मा, कुर्मी र शाह पार्टीभित्र देउवा खेमाका रुपमा चिनिएका छन् भने राणा, केसी पौडेल खेमाका हुन् । गौडेलचाहिँ सिटौला खेमाका मानिन्छन् ।
अघिल्लो अधिवेशनमा सर्वसम्मत रुपमा जिल्ला सभापति चयन भएको अर्घाखाँचीमा अहिले आधा दर्जन आकांक्षी देखिएका छन् ।
सर्वसम्मत सभापति बनेका विष्णु खनाल ‘मुस्कान’ ले सबैभन्दा पहिले क्रियाशील सदस्यताको सूची केन्द्रमा बुझाउने जिल्ला समितिको नेतृत्वका रुपमा आफूलाई अब्बल साबित गरेका छन् । तर यही जिल्लामा सभापति पदका लागि दुवै प्यानलका गरी आधा दर्जन आकांक्षी देखिएका छन् ।
पौडेल खेमाका ‘हार्ड लाईनर’ मानिने खनालले फेरि सभापति हुने इच्छा देखाएका छन् । पौडेल खेमाकै वर्तमान सचिव छविलाल पौडेल पनि यसपटक जिल्ला सभापति भएर पार्टी हाँक्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । सोही खेमाबाट उपसभापति शान्ता भण्डारी सभापति पदको दाबेदारका रुपमा अगाडि सरेकी छन् ।
यस्तै महासमिति सदस्य यादवप्रसाद घिमिरे पनि जिल्ला सभापतिका लागि दाबी गरिरहेका छन् । उनी देउवा खेमाका हुन् ।
सभापतिका अर्का दाबेदार इन्द्रमणि पौडेल र केशव श्रेष्ठ पनि चर्चामा छन् । पौडेलले गुट नखुलाए पनि श्रेष्ठ विगतमा देउवा गुटमा सामेल थिए ।
काँग्रेसको कपिलवस्तु जिल्ला कार्यसमितिको नेतृत्वका लागि पनि दुवै खेमाबाट आकांक्षीहरु नेताहरुको आशिर्वाद लिने कसरतमा छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा पटक पटक महत्त्पूर्ण भूमिका निर्वाह गरिसकेका काँग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्यायको गृह जिल्ला कपिलवस्तुमा देउवा खेमा र पौडेल खेमाका आकांक्षीहरु आफ्नो अनुकुल माहोल बनाउन दौडधुपमा लागेका हुन् ।
वर्तमान सभापति सुरेन्द्रराज आचार्य विधान अनुसार आसन्न अधिवेशनमा सभापति पदमा उम्मेदवार हुन नमिल्ने भएकाले जिल्लाले यसपटक नयाँ नेतृत्व पाउनेछ । यद्यपि आचार्यको सम्बन्ध काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग घनिष्ठ रहेको र कार्यकर्तामाझ पनि लोकप्रिय रहेका कारण अबको नेतृत्व चयनमा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
कपिलवस्तुमा देउवा समूहबाट नेता राजेश आचार्य सभापतिका आधिकारिक उम्मेदार बन्ने सम्भावना अधिक रहेको काँग्रेस कार्यकर्ताहरु बताउँछन् । काँग्रेस विभाजनकै समयमा उनले देउवा नेतृत्वको नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को जिल्ला कार्यसमितिको नेतृत्व गरेका थिए ।
पौडेल समूहबाट अब्दुल कलाम, सुधाखर पाण्डेय, केशव श्रेष्ठ जिल्ला सभापतिका आकांक्षी छन् ।
अन्य जिल्लाको तुलनामा पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा नेतृत्वका लागि हानथाप देखिएको छैन । यहाँ मोहन शर्मा र अर्जुन पोखरेलबीच नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावन बलियो रहेको प्रदेशसभा सदस्य वैजनाथ कलवारले बताए ।
शर्मा देउवा खेमा हुन् भने पोखरेल भने पौडेल खेमाका हुन् । जिल्लाका कार्यकर्तामाझ दुवैको उस्तै पकड रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
पूर्व गृह राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलको गृह जिल्ला नवलपरासीमा जिल्ला नेतृत्व चयनमा उनकै पनि मुख्य भूमिका रहने काँग्रेसजनहरु बताउँछन् ।
वर्तमान सभापति विष्णुप्रसाद पौडेलले माथिल्लो निकायमा जाने मनसाय बनाएको र जिल्लामा नयाँ अनुहारका लागि ठाउँ खाली गर्न थालेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् । तर उनी आफै भने अहिले यसबारे बोल्ने बेला भइनसकेको बताउँछन् । ‘अहिले साथीहरु अपरिपक्व प्रचारमा लागेका छन्,’ उनले भने, ‘अझै समय छ, अहिले नै हल्ला गरेर हुँदैन ।’
कुनै समय नेपाली काँग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काको बलियो पकड रहेको दाङ जिल्लामा सभापतिमा रुचि राख्नेहरू धेरै देखिएका छन् । कुनैबेला खुमबहादुर खड्काको साथ रहेका नेताहरु अहिले देउवा पक्षबाट सभापति बन्ने लाइनमा छन् ।
कमल किशोर घिमिरे, गेहेन्द्र गिरी, राजु खनाल, जानकीलाल बस्नेत, किरण शाह, जगत खड्का लगायतका नेता सभापतिका दाबेदारका रुपमा देखिएको प्रदेशसभा सदस्य डिल्ली चौधरीले बताए । यीमध्ये धेरैजसो देउवा पक्षका हुन् ।
काँग्रेस नेता दीपक गिरी भने पौडेल समूहमा छन् । जिल्ला नेतृत्व चयनमा उनको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने आँकलन गरिएको छ ।
अन्य जिल्लामा आकांक्षीहरु खुल्नै बाँकी
पाल्पा, प्युठान, रोल्पा, पूर्वी रुकुम, बर्दिया जिल्लामा भने सभापति पदका आकाँक्षीहरु खुल्न बाँकी छ । जिल्लामा महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि बढ्न थाले पनि जिल्ला नेतृत्वका लागि अन्य जिल्लामा जस्तो यी जिल्लामा आकांक्षीहरु अघि सरिसकेका छैनन् । यद्यपि भित्रभित्रै नेताहरु आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन सक्रिय भइरहेका छन् ।
सुदूरपश्चिममा काँग्रेस अधिवेशनको रौनक : कुन जिल्लामा को–को छन् सभापतिका दाबेदार ?
मोरङ काँग्रेसमा महाधिवेशनको सरगर्मी, कोइराला प्यानल बाजी मार्ने दाउमा